अन्तर्राष्ट्रिय Archives - sandeshpost
Home > Archive by Category अन्तर्राष्ट्रिय
फ्रान्सको एक शहरमा क्रिसमस बजारलाई लक्षित गरी मंगलबार भएको आतंककारी आक्रमणलाई सन् २०१५ पछिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमणको रुपमा लिइएको छ । मंगलबार राति फ्रान्समा एक क्रिसमस बजारमा बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा चार व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । क्रिसमस बजारमा मंगलबार स्थानीय समयानुसार राति ८ बजे एक बन्दुकधारीले गोली चलाएका थिए […]
December 4, 2018 admin17
जमिनमुनिबाट अत्यधिक मात्रामा पानी तान्यो र भूमिगत पानी ‘रिचार्ज’ हुन पाएन भने त्यसको परिणाम के हुनसक्छ? यसको पछिल्लो उदाहरण इरानको राजधानी तेहरानमा देख्न सकिन्छ। पश्चिम एसियाकै सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको यो सहर केही समययता निरन्तर भासिँदै गएको छ। भूगर्भ वैज्ञानिकहरूले स्याटलाइट तस्बिर विश्लेषण गरी तेहरानका केही भाग वर्षको २५ सेन्टिमिटरका दरले भासिँदै गएको बताएका छन्। […]
December 1, 2018 admin42
एजेन्सी : अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज एच डब्लू बुसको निधन भएको छ । ९४ वर्षीय बुसको शुक्रबार मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यामहरुले खबर दिएका छन् । बुस सन १९८९ देखि १९९३ सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए । उनी रिपब्लिकन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि सन १९९२ मा […]
November 20, 2018 November 20, 2018 admin42
एजेन्सी |संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिकागोस्थित एक अस्पतालमा अन्धाधुन्ध गाेली चलेकाे छ । साे गोलीकाण्डमा ४ जनाको ज्यान गएको जनाइएकाे छ । ज्यान गुमाउनेमा अस्पतालका दुई महिला कर्मचारी, एक प्रहरी अधिकारी र स्वयम्‌ बन्दुकधारी छन् । जसमध्ये १ जना साेही अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक समेत रहेकाे बताइएकाे छ । स्थानीय समयअनुसार साेमबार ३ बजेतिर शिकागोको मर्सी अस्पतालमा गोली चलेकाे […]
November 8, 2018 November 8, 2018 admin411
अस्ट्रेलियाको सिड्नी एअरपोर्ट यति बिजी हुने रहेछ : सेकेन्ड सेकेन्डमा प्लेन यसरि उड्ने र ल्याण्ड गर्ने रहेछ हेर्नुहोस रमाइलो दृश्य यो भिडियोमाSydney Airport is an international airport in Sydney, Australia located 8 km south of Sydney city centre, in the suburb of Mascot. The airport is owned by the ASX-listed Sydney Airport Group. It is […]
जापानमा पूरै टापु गायब भएपछि सरकारको होस उड्यो, टापु नभेटिए रुससँग विवाद हुने
November 6, 2018 admin148
एजेन्सी। मानिसका केही सामानहरु हराएको त हामीले सुनेका छौं तर जापानमा यस्तो घटना भएको छ जसले गर्दा जापान सरकारको होस उडेको छ । यही आइतबार यहाँ पूरै टापु गायब भएको थाहा भएपछि हंगामा भएको छ । यो टापु गायब भएको सरकारलाई पनि जानकारी थिएन । जापानको इसेबेहनाकोजिमा नामको टापु गायब भएको हो । यो सानो […]
November 4, 2018 admin72
अष्ट्रेलियाको सिमाना सुरक्षा बलले एक ३२ वर्षीय भारतीय मूलको व्यक्तिसहित पाँच जनालाई स्थायी आवास भिसाका लागि अष्ट्रेलियन नागरिकसँग विवाह गराउने षडयन्त्र गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले लामो समयसम्म गरेको अनुसन्धानपछि यो गिरोहको पर्दाफास भएको हो । अष्ट्रेलियामा पीआर पाउनका लागि विवाह गराइदिने र यस वापत शुल्क लिने गरेको खुलेको छ । प्रहरीले यही […]
हजारौं आप्रवासीलाई गोली हान्न ट्रम्पको आदेश
November 3, 2018 admin102
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमाक्षेत्र हुँदै अमेरिका छिर्दै गरेका आप्रवासीहरुलाई गोली चलानउ सुझाव दिएका छन् । ग्वाटेमाला, होन्डुरस, एल साल्भाडोरबाट मेक्सिको हुँदै अमेरिका छिर्न प्रयासरत ५ हजार भन्दा बढी आप्रवासीहरुलाई गोली चलाउन आदेश दिएका हुन् । आप्रवासीहरुले सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगा प्रहार गरेको अवस्थामा उनीहरुमाथि गोली चलाउन ट्रम्पले आदेश दिएका छन् । अहिलेसम्म अमेरिकी […]
अफगानिस्तानमा सैनिक हेलिकोप्टर दुर्घटना, २५ जनाको मृत्यु
October 31, 2018 admin116
हेरात । अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त फराहमा बुधबार अफगान सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । उक्त दुर्घटनामा हेलिकोप्टरमा सवार सबै २५ जनाको मृत्यु भएको अफगान अधिकारीहरुले बताएका छन् । इरानसँगको सीमा जोेडिएको फराह प्रान्तका गभर्नरका प्रवक्ता नासिर मेहरीले अनार डारा जिल्लामा खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको जानकारी दिनुभयो । हेलिकप्टरमा चालक दलका दुई सदस्य र […]
एक सय ८८ जना यात्रु बोकेको बिमान दुर्घटनामा परि सबैको मृत्यु भएको आशंका, समुद्रको पानीमाथि हवाईजहाजबाट चुहिएको तेल देखियो (भिडियोसहित)
October 30, 2018 admin103
काठमाडौँ — एक सय ८८ जना यात्रु बोकेको लायन एयरको बोइक-७३७ विमान सोमबार बिहान दुर्घटना भएको छ । राजधानी जाकार्ताबाट उडेको लायन एयरको बोइङ्ग ७३७ लगत्तै दुर्घटनामा परेको हो । पाङ्गकाल पिनाङ्गका लागि उडेको विमान दुर्घटना भएको हो । उडेको केही १३ मिनेटमा कन्ट्रोल रुमसँग सम्पर्क टुटेको थियो । स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान ६ […]
यौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ? (42)